Maalinta Bini’aadannimada Adduunka Oo Maanta La Xusayo – Goobjoog News
Maalinta Banii’aadamnimada Aduunka ayaa dunida laga xusaa maanta oo kale sanad walba, waxaa sidoo kale inta badan laga hadlaa dadka ka shaqeeya howlaha Banii’aadamnimada iyo dadku ku waxyeeloobay howlahan, waxaa dadka lagu wacyi galiyaa Banii’aadaminimada iyo isu gargaaridda.
Waxaa sidoo kale warbixino soo diyaariyo xafiiska isku xirka arrimaha bani’aadannimada ee Qaramada Midoobay ee magaciisa loo soo gaabiyo (UNOCHA).
Qaramada Midoobey ayaa mar walba cusboonaysiiso sida ay uga go’an tahay dedaallada ku aaddan naf-badbaadinta iyada oo la xusuusanayo dhammaan kuwii naftooda ku waayay iyo kuwa ku guda jira howsha bani’aadannimada.
Qaramada Midoobey waxaa ay sheegtay in shaqaale badan oo howl banii’aadamnimo ku guda jiro ay naftooda ku waayeen.
Qaramada Midoobay waxaa ay ku celcelisaa in weerarrada loo gaysto shaqaalaha bani’aadamnimada ay caqabad ku yihiin badbaadinta dadka sida aadka ah ugu baahan caawinaadda.
Maalinta Banii’aadamnimada waxaa ku dhawaaqay Jimciyadda Qurumaha ka dhaxeysa December 2008, waxaa markii ugu horeysay la maamuusay August 2009.
Maanta oo kale sanad walba waxaa la xusaa August 19 sanadkii 2003-dii oo Qaramada Midoobey shaqaalaheeda ku xasuustaan dhibaato iyo naxdin.
Maalintaas wakiilkii xog-hayaha guud ee Qaramada Midoobay ee Ciraaq Sérgio Vieira de Mello iyo 21 la shaqeeneysay ayaa ku dhintay bambaanooyin lagu weeraray xarunta Qaramada Midoobay ee magaalada Baqdad ee dalka Ciraaq.
Dalkeena Soomaaliya waxaa uu ka mid yahay dalalka ugu qatarta badan xagga nolosha dadka ka shaqeeya Banii’’aadamnimada, Waxaa lagula kacaa Dil, Dhac iyo afduub intaba, waxaa kaloo jira dalal kale oo shaqaalaha Baniiaa’aadaminimada Qatar galaan sida Afgaanistaan, Ciraaq, Falastiin iyo Suudaan.
Ugu dambeyntii Maalitan Banii’aadamnimada waa maalin maamuus, mana aha Maalin dunida ay fasax gasho, waxaa la isku dhiiri galiyaa howlaha Banii’aadamnimada.
Libjag hxflcu cialis prices cialis discount
Wfjdgm ggmrgk Viagra buy generic cialis
Ciuraq xxgqov walmart pharmacy canadian pharmacy
sildenafil rx prescription generic viagra cheap viagra onlin...
viagradiscount photos of real viagra viagra and dapoxetine...